Uyifunda njani ibhayibhile ukuze uyiqonde Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Uyifunda njani ibhayibhile ukuze uyiqonde. Zininzi iindlela zokufunda iBhayibhile ukuze uyiqonde. Nangona kunjalo, umntu ngamnye kufuneka lungelelanisa ukufunda kwakho ngokolwazi lwakho yezibhalo.
Ke ngoko, kuxhomekeke kwinqanaba okhoyo, sikunika iingcebiso ezithile kuzo ungaqala ngaphi ukuyiqonda ngokuchanekileyo.
1 Ungayifunda njani iBhayibhile ukuze uyiqonde: Amanyathelo okuqala
2 Ndifanele ndiyifunde njani iBhayibhile?
2.1 1. Ukuba uyaqala ukudibana neBhayibhile:
2.2 2. Ukuba ufuna ukwandisa ulwazi lwakho malunga neBhayibhile:
2.3 Iincwadi emazifundwe nanini na:
2.4 Iincwadi ezenzelwe xa uhambele phambili:
3 Imisebenzi yokuququzelela okanye yokwenza umntu afunde
Ungayifunda njani iBhayibhile ukuze uyiqonde: Amanyathelo okuqala
Uyifunda njani ibhayibhile ukuze uyiqonde ngokuchanekileyo
Ngaphambi kokuba uqale, zibuze lo mbuzo:¿Ndazi ntoni ngeBhayibhile? ". Ngaphandle kokuyifunda, abanye abantu bakhule beva amabali kwibhayibhilekodwa abanye zange babenalo olu nxibelelwano lusisiseko ngeLizwi likaThixo. Ukweyiphi imeko?
Qala ngokukhetha iBhayibhile yakho. IBhayibhile yayingabhalwanga ngeSpanish, ke iguqulelwe. Kukho iinguqulelo ezininzi ngeSpanish, ukusuka kwezindala, ngolwimi lwakudala ngakumbi, ukuya kolwanamhlanje, kodwa lungqongqo. Ungayikhetha ngokobungakanani bepokotho okanye ingxelo echithiweyo eneenkcazo ezantsi komhlathi.
Thatha isigqibo sokuba lingakanani ixesha onokulinikezela ngosuku ngalunye. Ukuba ufutshane ngexesha, funda isahluko okanye ezimbini ngosuku. Ukuba unexesha elininzi, unokufunda kancinci. Ibhayibhile yincwadi enomxholo wokomoya, ke kubalulekile ukuba uthathe ixesha elincinci uthandaze uzame ukuqonda oko ukufundayo.
Wonke iphepha leBhayibhile linayo ndice ngaphezulu. Ke ukuba awazi ukuba iphi incwadi yeBhayibhile, khangela iphepha elikwisalathiso. Sebenzisa izibonelelo onazo iBhayibhile yakho.
Ndifanele ndiyifunde njani iBhayibhile?
Ibhayibhile yahluke kancinci kwezinye iincwadi. Ngokwenyani, yingqokelela yeencwadi ezingama-66 eziqokelelwe kudidi loncwadi (ezembali, imibongo, isiprofeto, ivangeli, i-epistolary ...), hayi ngokulandelelana, nangolandelelwano lwamaxesha. Ke kwabo baqala nje, ayingombono olungileyo ukuzama ukufunda ikhava ukuyigubungela.
1. Ukuba uyaqala ukudibana neBhayibhile:
Qala ngenye yeevangeli ezine kwiTestamente eNtsha:UMateo, uMarcos, uLucas okanye uJuan. Aba bantu bane babhala ngobomi bukaYesu, elowo kubo ngokwembono eyahlukileyo. Nayiphi na kwezi ncwadi Ndiza kukubonisa ukuba ngubani uYesu, oyena mntu uphambili eBhayibhileni.
Izenzo Zabapostile bala i Imbali yokusekwa kweCawe emva kokuvuka kukaYesu. Le ingayincwadi enomdla kuyo funda emva kwenye yeevangeli.
ukuba uqonde ngakumbi ngobomi bobuKristu, unokufunda ezinye zeencwadi emva kweZenzo zabaPostile, ezinje nge KwabaseRoma okanye KwabaseTesalonika. Ezi ncwadi ziya kukunceda uluqonde ngcono usindiso kunye nendlela ubomi obahluke ngayo emva koko. Amanyathelo afanelekileyo okufumana ulwazi olusisiseko ngeendaba ezilungileyo.
2. Ukuba ufuna ukwandisa ulwazi lwakho malunga neBhayibhile:
Qala ngokufunda iincwadi zembali zeTestamente eNdala, ukususela kwiGenesis ukuya kuEstere. Ezi ncwadi xelela ibali lokudalwa kwehlabathi Kwaye baya kukunceda uqonde indlela asebenza ngayo uThixo kuyo yonke imbali. Kanjalo babalisa ibali labantu bakwaSirayeli kunye nendima yabo kwizicwangciso zikaThixo.
Emva kokufunda iincwadi ezintlanu zokuqala zeBhayibhile, kuya kuba kuhle ukuba ufunde incwadi yamaHebhere, kwiTestamente eNtsha. Gcina ukhumbula ukuba ezinye zeencwadi zembali zibalisa amabali aphindaphindiweyo, kodwa ngokweendlela ezahlukeneyo.
Iincwadi zeziprofeto (ukusuka ku-Isaya ukuya ku-Malaki) xelela indlela uThixo awabalumkisa ngayo abantu ethubeni malunga nokuza kwenzeka. Ukuba uthatha isigqibo sokufunda ezi ncwadi, licebo elilungileyo ukuzama ukuzifunda ngokulandelelana kwazo kwaye ujonge imeko yezembali ngaphambi kokufunda incwadi nganye.
Iincwadi ze iziprofeto yeTestamente eNdala kunye nencwadi Apocalypse, banokuba kunjalo kunzima ukuyiqondar. Kodwa ungakhathazeki. Nditsho nabona bafundi beBhayibhile bakrelekrele kunzima kubo ukufunda ezi ncwadi!
Iincwadi emazifundwe nanini na:
Iincwadi ze IiNdumiso neMizekeliso Banomdla kwaye bayakhuthaza ukufunda nanini na, nokuba ungazi kangakanani ngeBhayibhile. Inkqubo ye- Iindumiso yimibongo neengoma Ukunyaniseka kakhulu kuThixo kwaye incwadi yeMizekeliso inezinto ezininzi isiluleko sobulumko kubomi bemihla ngemihla.
Iincwadi ezenzelwe xa uhambele phambili:
Iingoma: yimibongo malunga nexabiso lothando phakathi kwendoda nomfazi.
INtshumayeli: kubonakalisa ukungabinamsebenzi kwayo yonke into ngaphandle koThixo.
umsebenzi: yincwadi evavanya eyona mibuzo inzima malunga nokubandezeleka, ngaphandle kokunika iimpendulo ezilula.
Imisebenzi yokuququzelela okanye yokwenza umntu afunde
Le mizekelo ingasentla ziingcebiso ezimbalwa zokufunda iBhayibhile. Nawe unokwenjenjalo jonga izicwangciso zokufunda kwi-intanethi okanye ezincwadini, ezinokuthi zilungele imeko yakho.
Zama thetha nomfundisi, umfundisi, okanye umntu onolwazi olungakumbi ngeBhayibhile. Lo mntu unokukunceda wenze isicwangciso esifanelekileyo kuwe kwaye uphendule yonke imibuzo yakho.
Ukuba uya rhoqo ecaweni, Uya kufunda ngakumbi ngeBhayibhile kunye nokusebenza kwayo ebomini bakho. Icawe liqela labantu eliye lasibona isidingo sabo sokuhlangana ukuze bafunde, bafunde kwaye baqonde iBhayibhile.
Kukwakho nezixhobo ezininzi kwi-Intanethi nakwiincwadi, ezinje ukuzinikela kwemihla ngemihla, amagqabantshintshi, iincwadana zebhayibhile, njl.. ukukunceda uqonde ngcono isicatshulwa seBhayibhile, njengezichazi-magama, iimephu, ulwazi malunga nembali kunye nenkcubeko yexesha. Ukuba awufundi, kungenxa yokuba awufuni!
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uyazi uyifunda njani ibhayibhile ukuze uyiqonde. Ukuba ngoku ufuna ukwazi ifayile ye- Isizathu sokuba uYesu aqalekise umkhiwane, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.